Waxgaradka Hiiraan Oo Maanta Maamulka Isbitaalka Beledweyn Ku Wareejiyey Dhaqaalle Ay Iska Soo Ururiyeen | Radio Muqdisho
Waxgaradka Hiiraan Oo Maanta Maamulka Isbitaalka Beledweyn Ku Wareejiyey Dhaqaalle Ay Iska Soo Ururiyeen
Published on January 3, 2013 by admin · No Comments · 1,386 views
Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa maanta maamulka Isbitaalka magaalada Beledweyn ku wareejiyey deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen Odayaasha iyo Waxgaradka.
Deeq lacageed oo ah mid ay waxgaradka gobolka Hiiraan iska soo ururiyeen ayaa waxey ugu talagaleen iney ku taageeraan isbitaalka magaaladaasi si uu Isbitaalku usii wado adeegga uu u hayo shacabka gobolka Hiiraan ku dhaqan.
Maamulka isbitaalka guud ee magaalada Beledweyn oo ka hadlay deeqdaasi lacageed ee uu la wareegay ayaa waxgaradka reer Hiiraan uga mahad celiyey sida ay isugu xil qaameen iney dhaqaalle ay jeebkeeda kasoo ururiyeen ku taageeraan Isbitaalka si uu u shaqeeyo.
Sidoo kale qaar ka mid ah Waxgaradka maanta deeqda lacageed iska soo ururiyey oo iyaguna ka hadlay munaasabadda ay lacagta ku wareejinayeen ayaa sheegay in lacagtan ay isaga soo ururiyeen si aysan u istaagin howlaha isbitaalka waxaana ay waxgaradku ku booriyeen Jaalliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa iney u istaagaan sidii Isbitaalkaasi loo caawin lahaa oo dhaqaale loogu heli lahaa maadaama isbitaalku aanay jirin xiligan hay’ad gacanta ku heysa.
Isbitaalka guud ee magaalada Beledweyn ayaa waxaa ku xeran oo adeeg caafimaad ka hela dadka ku dhaqan gobolka Hiiran iyo gobollada kale ee ku dhow dhow balse Isbitaalka ayaanay hada jirin cid gacanta ku heyn maadaama hay’adda MSF oo isbitaalkaasi gacanta ku heysay ay isaga baxday gobolka.